Thwebula Microsoft Silverlight 5.1.50907 – Vessoft
Thwebula Microsoft Silverlight
Ikhasi elisemthethweni: Microsoft Silverlight
I-Wikipedia: Microsoft Silverlight
Microsoft Silverlight – a platform isofthiwe ukuze bandise amathuba iziphequluli popular. Isofthiwe inikeza kwethulwa web-izicelo ahlukahlukene kanye replays izithombe, Vector ihluzo kanye nokuqukethwe kwabezindaba iziphequluli zanamuhla. Microsoft Silverlight ikuvumela ukuba aklame lesi ezinhlelweni lapho izicelo interactive kanye multimedia ehlangana. Isofthiwe isekela umsebenzi izilimi ezihlukahlukene izinhlelo kanye baxhumana iningi yesimanje web-izicelo. Microsoft Silverlight iqukethe inqwaba izakhi control for ukudalulwa ephelele ithalente Onjiniyela ’.
Ukuxhumana ne iziphequluli popular
Ngcono izinkomba interactivity nesivinini izicelo
Khona izakhi control multiple
Ukuxhumana nezinye inethiwekhi technologies
Amazwana ku Microsoft Silverlight
Microsoft Silverlight software ehlobene
Isethi izingxenye sokwandisa ezenzelwe kanye multimedia ye-computer. Isofthiwe kuqinisekisa operation lesifanele kwezicelo ahlukahlukene kanye imidlalo.
Imenenja cookies iziphequluli popular. Isofthiwe kwenza ukwakha uhlu cookies ukuvimbela ukususwa kwabo.
Iphakethe kwezicelo ukusebenza ngempumelelo amafayela emidya nemidlalo. Isofthiwe kuthinta ukucutshungulwa izinto graphic, ukusakaza umsindo kanye nokwenza imidlalo.
Ithuluzi ukulawula ukulayisha ngokuzenzekelayo kwezicelo, amasevisi kanye izingxenye. Isofthiwe ikuvumela ukulungisa ekuqaleni othomathikhi-akhawunti amaningi.
Isicelo popular for the iziphequluli enikezela ukudlala okuqukethwe kwabezindaba ngesikhathi kokuhlala internet. Futhi isofthiwe isetshenziswa ukuthuthukisa okuqukethwe ukuzijabulisa.
Ubuchwepheshe for ukusebenza egcwele izingxenye ezihlukahlukene kanye nezicelo ezibhalwe Java ulimi lokwakha izinhlelo. Isofthiwe andisa kakhulu amathuba isiphequluli abakhululekile-ezisebenzayo in inethiwekhi.
.NET Framework 4.7.1 futhi 4.6.2
Izinothi zokunamathisela kanye nabahleli, Izandiso, Ezinye software
Imvelo akhiphe web-services ngaphandle usebenzisa isiphequluli. Isofthiwe isekela umsebenzi izicelo, imidlalo kanye namathuluzi ukuze uthuthukise ukusebenza.
English, Afrikaans, Українська...
Igeyimu yokwenza ngcono
Le service ifu yokudlala ukudlala imidlalo on the ubuchwepheshe video ukusakaza. Isofthiwe kunikeza ukudlala imidlalo olindele kunazo on the kumadivayisi ne low system nemingcele.